Ithimba abacibishelayo ngokuvamile kusho ukuthi wena zihlukaniswe amaqembu amabili futhi ukulwa nabanye. Nokho, uma abadlali zenzele wena, kukhona awokuthi impi kungaba yokungathembeki. Omunye iqembu kungenzeka abadlali ephezulu iphrofayela kwesinye - kulezi zifiki. Ngokwemvelo, iqembu lesibili ngeke nethuba. Ngakho-ke, lo mdlalo yanamuhla uhlobo yasungulwa izindlela nokulinganisa amathuba okuthi womabili amaqembu. Ngokwesibonelo, e-Bhalobhasha ethandwa "FF 2" umdlalo ngezikhathi wenza i okulinganisa okuzenzakalelayo imiyalo nokulinganisa inombolo yabadlali, kanye ukwakhiwa ukuxuba, sibalekele ukuwela omunye ithimba anamandla kakhulu kunazo zonke abadlali. Nokho, inguqulo yakamuva ye edume "Conter-Strike" kuyinto indlela ephumelela kakhulu - lapha kukhona izihloko, okuyinto avuke ngokuzenzakalelayo, kuxhomeke ekutheni ziyenze kanjani udlala. Akukho ndawo, Nokho, engakaze ezichazwe esimisweni lapho kukhona nokwanda, ngakho abadlali abaningi uyazibuza kanjani ukwandisa esiphezulu CS: GO.
Yiqiniso, ukuntula imali isiqondiso esicacile futhi izincazelo ikhiqize inqwaba zinganekwane mayelana nendlela yokuthuthukisa esiphezulu CS: GO. Abaningi baye bame kwelokuthi lokhu sibalo incike inani izitha wena abulale umdlalo. Abanye aphonse ngokwabo ku ngokwedlulele futhi bathi ngisho ucabangela izinkomba akhawunti ezifana iphesenti hits ekhanda. Ngokuvamile, wonke umuntu uzama beveza into yokuqala futhi ekhethekile ukuze bathethelele yokuthi ayizange ukukhulisa, noma ukuze sichaze ukuthi kungani wathola umfutho. Empeleni, konke kulula kakhulu nawo wonke umuntu kalula ukuze kwandiswe esiphezulu CS: GO.
Ukunqoba iyona ebaluleke kakhulu
Ngakho, uma ufuna ukufunda indlela ukwandisa esiphezulu CS: GO, uzodinga silwele into eyodwa - ukunqoba. Kungakhathaliseki ukuthi indlela uzothola kubo - ungase ngisho umdlali embi kakhulu ku nethimba lakhe. Kodwa uma ithimba lakho iyaphumelela, khona-ke ngizamvusa simo sakho.
Omunye umbuzo: Ingabe uyidinga? Phela, isilinganiso ukwanda futhi uthuthukise izinga labamelene yakho, ngakho-ke kungenzeka ukuthi wena kumelwe ukuba abulawe kanjalo ngaphandle kwezinkinga, ikakhulukazi uma unquma ukuba ahlukane ithimba labo futhi udlale bebodwa. Ngokwemvelo, akekho ibonisa ukuthi ezinye izilungiselelo akuziphazamisi Isilinganiso ukwanda, kodwa abe, umphumela okhethekile ohambisana. Zonke inani elifanayo onqobayo - kuyinkomba ebaluleke kakhulu. Nokho, futhi naye akunjalo elula - isidingo cabanga kabanzi ngokucophelela uhlelo phezu lapho ukwanda ukuze baqonde yonke imininingwane kulesi sihloko ku CS: GO (indlela yokuthuthukisa isihloko njengoba singalahlekelwa, nokunye).
Okokuqala odinga ukukwazi lokho zero iphuzu kule CS: GO. Indlela yokuthuthukisa izinga, uma ungenawo baqonde izisekelo eziyisisekelo? Ngakho, kuwo wonke amazinga, kukhona iphuzu elithile reference, oyithola uma kwathatha ebangeni lelilandzelako. Uma uhlomula, ungeza amaphuzu uma ulahlekelwa - uyasuswa.
Yiqiniso, asikho ukuhumusha phezulu noma phansi ngemva anqobe izizwe eziningi futhi omunye ukuhlulwa. I-zero iphuzu luyasetshenziswa ukuthola umsuka, kodwa nesilinganiso nhlangothi zombili, okungaba elahlukile bezigaba ezingafani. Njengoba ubona, isihloko e CS: GO akulula kangako ukuze uthole. Kodwa yiko ngenxa eyodwa ukunqotshwa, awukwazi.
Promotion futhi yizembe
Rank e CS: GO - lena isigaba eziguquguqukayo, ungahambisa komunye kuncike impumelelo yakho. Kodwa uyini uhlelo? Lapho wena zero iphuzu isihloko, une isitokwe kokubili kunqoba futhi ukunqotshwa, okungukuthi, ungayibuyiseli isimo odlule ngokushesha uma ulahlekelwa, kodwa futhi kuyadlondlobala ngokushesha ukubala lutho.
Ake sithi, ngenxa yesizathu esisodwa isihloko has ngokunqoba amahlanu kanye ukunqotshwa in isitokwe. Lokhu kusho ukuthi kudingeka uwine kahlanu ukuya esicongweni esisha, kodwa uma ulahlekelwa kahlanu, bese futhi uzithola ezingeni odlule. Kulokhu, zonke izinto kahle-ukulinganisela. Uma uhlomula emidlalweni emine, sivuleka ezingeni lesine ukuba bathuthuke. Uma ulahlekelwa ke omunye umdlalo, bese imiphumela yakho ngeke kabusha, nje iphuma isipele elilodwa ezingeni, ebhekene eyesithathu. Futhi manje udinga uwine ngaphezu kwesikhathi esisodwa, kodwa ababili.
Ngemva kokufunda lesi sihloko ekuthuthukiseni esiphezulu CS: GO ngeke imfihlo ngawe, futhi uzokwazi ukulawula le nqubo.
Isisekelo hf TH8: izici ukubekwa
Indlela faka ikhodi ku "The Sims 3"? Amakhodi "The Sims 3" ku isilwane, a mermaid noma amakhono
Okusetshenzelwe Value Indlela e Project Management
"Balda" - ukudoba ngenela. Species, izimboni, amapulazi akhiqiza izimfihlo ukudoba